About Us - Foshan Fumei fadhiga Co., Ltd
Shirkadda Our leeyihiin qaar ka mid ah, maamulka iyo horumarinta shaqaalaha xirfadeed oo tayo sare leh. Waxay uga sooco, horumarinta iyo hubinta tayada sheyga, la xariirta qaabka wax soo saarka iyo design si ay u sameeyaan shirkada noo sii. Waxay hubisaa in alaabta oo dhan our waxaa loo diri doonaa macaamiisha leh tayo sare sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dhigi doonaa.
Waxaan leenahay laan ka mid ah gudaha ee Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Ha'erbin, Jilin, Shandong, Zhengzhou, Suzhou, Fujian, Wuhan iwm waxyaabaha Our sidoo kale dhoofin in America, Australia, Russia, Middle East, Africa, South East Asia iyo qaar ka mid ah dalalka kale.
Ku sugnaanta focus on joogo iyo ku hayaa mustaqbalka, aan ay ka buuxdo kalsooni oo calan kor qorshaha horumarinta mudada dheer si ay u rajaynayaa in ay iskaashi la saaxiibo ah adduunka oo dhan, si ay u gaaraan doonayo guul-guul ah aniga iyo adiga labadaba . Waxaan loo ogaado in ay la shaqeeyaan macaamiisha cusub iyo wax duug ah si ay u abuuraan aasaas qarnigii-jir ah iyo mustaqbalka cajiib ah.